Video: Hip Hop Orchestra Concert 2011, Yangon - Part 1 | Myanmar Celebrity Gossip & News
Video: Hip Hop Orchestra Concert 2011, Yangon - Part 1
Here isavideo of Hip Hop Orchestra Music Concert which was held on 31 July 2011 at Thuwanna Indoor Stadium, Yangon. This was the first time Hip Hop concert which was performed together with an Orchestra Band. Myanmar popular hip hop singers; Sai Sai Kham Hlaing, J Me, Yatha, Jock Jack, Kyaw Htut Swe, Sandy Myint Lwin, Bobby Soxer, Wyne Su Khine Thein, Mi Sandy, Bunny Phyoe and many more hip hop singers performed for this Concert. Hip Hop Orchestra Concert is arranged by Bo Bo Entertainment asafund raising activity for Myanmar Disable athletes' Association.
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ကျင်းပခဲ့တဲ့ Hip Hop Orchestra Concert ပွဲဗီဒီယို Video of MyanmarCelebrity.Com!!!
Video on Youtube!!!!
Continue Watching Hip Hop Orchestra Concert - Part2Video of MyanmarCelebrity.Com
sanAugust 6, 2011 at 8:31 PMstate is too smallReplyDeletePhoAugust 6, 2011 at 9:48 PMမြန်မာ Hip Hop ကို တန်ဖိုးနိမ့် Entertainment တစ်ခုအနေနဲ့တော့ လက်ခံပါတယ်။ReplyDeleteanti-hip hopAugust 6, 2011 at 10:40 PMမန်မာ Hip Hop ကို တန်ဖိုးနိမ့် Entertainment တစ်ခုအနေနဲ့တော့ လက်ခံပါတယ်။ReplyDeleteဟနျမြိုးထှေးAugust 6, 2011 at 11:12 PMLOL..ReplyDeleteaung khant kyawAugust 7, 2011 at 2:34 AMမြန်မာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ state စင်ကအဲ့ လောက်ဘဲဆိုရင်တော့အရှေ့ က ကိုကို မမ တို့ ပြောတလိုဘဲသေးလွန်းပါတယ်...ဒီပွဲကမြန်မာနိုင်ငံ hip hop ကိုယ်စား၊ပြုပွဲကြီးမဟုတ်လား...state စင်ကိုကြည့်လိုက်ကတည်းက impressoion down သွားပါပြီ...ReplyDeletehantharAugust 7, 2011 at 1:59 PM၀ိုင်းစုခိုင်သိန်းက မက်လောက်စရာနဲ့လမ်းမကြီးရဲ့ဘေးကနေကို မထွက်တော့ဘူး... ပွဲတိုင်းဒါကြီးဘဲReplyDeletePhoAugust 8, 2011 at 12:17 AMအင်္ဂလိပ်စာလုံး ညှပ်သုံးသောသူများ စာလုံးပေါင်း သတိထားကြပါ။ State စင် မဟုတ်ပါဘူး။ Stage စင်ပါ။ State ဆိုတာ နိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ တူရာဒေသတွေလို့ အဓိပ္ပါယ်ရသလို၊ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှာ ရောက်ရှိနေတဲ့ အခြေအနေတစ်ရပ်ကိုလည်း ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်မထူးပါဘူး..ခင်ဗျားတို့ပြောသလို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ state ဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ရဲ့ အခြေအနေ ကလည်း ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ မှုန်မွှားမွှား၊ ခပ်သေးသေးပါပဲ။ :)ReplyDeletezenAugust 8, 2011 at 8:18 AMsan. pho .anti hip hop . min toe tg thu toe loutasint shi lo lar leader twayathone ma kya lo tine pyay ka poor ter but they haveatalent.koe ko tine kaayayachin ma shi pal nae thu myar ko ma kae yae nae. fu..k pal.tan pho naint entertainment lo pyaw ya aung min ka barasin shi lo lar .myanmar pyay mhar born pi lu par wa nay tel everybody mhar thu tan pho nae thu shi tel ko ko taing laleloutayayachin lal ma shielout tg ma lote naing pal nae go and eat sh..t.ngar oversea mhar nay ter kyar pi but i love my country .ReplyDeleteUnknownAugust 8, 2011 at 8:30 AMa yin tone ka so china.thai.hong kong. macau. barasint shi lal.but thu toe koe lu myo koe country ko bal tot mha ma kae yae bu they love their country . but today de lo toe tat lar aung thu toe tway kyo sar tel thu toe tan naing tha lout countryatwetakyo phu tel kae yae nay lo koe tine pyay koe lu myo ma toe tat bu ma kg bu soapyu tha paw nae kg lar aung pyaw ma kae yae nae min toe lal myanmar pyay mhar born pi myanmar pyay ka ta min sar ter ta lote sar phu tg kyay zuu shi tel pls koe tine pyay toe tat aung san da pyu kya par kwarReplyDeleterandom thingsAugust 8, 2011 at 7:26 PMThird World Country !!!! Hate myself being one of them but no choice.ReplyDeletekikiAugust 15, 2011 at 9:13 PMဘယ်လိုမှမကိုက်ညီဘူး Orchestra & Hip-hop ၀ိုင်းSUCK ကလဲ တခါလာလည်း ဒီသီချင်းပဲ စိုင်းစိုင်းတို့အဖွဲ့လဲဘာထူးလည်း ဒီထဲမှာပဲ ပတ်ပတ်လည်နေတာ ပရိတ်သတ်ကလဲစောက်ရှုးတွေ ငမူးတွေ ငရှုးတွေReplyDeletezyAugust 26, 2011 at 9:53 PMဟား ဟားအစဆိုတော့ ဒီလိုပေါ့လေ။ သည်းခံကြပါ။နောက်ကနေလိုက်ရတာဆိုတော့ ဘယ်တူပါ့မလဲ။ReplyDeleteAdd commentLoad more...